Agate geode - Quartz Cryptocrystalline crystalline - video
Agate waa dhagax ku salaysan inta badan silica cryptocrystalline, madaxbannaan madax-furan, oo ku-beddelma quartz. Waxaa muuqata by dhadhanka hadhuudh iyo kala duwan ee midabka. Inkasta oo aan helnay waayeelka noocyo kala duwan oo dhagax ku yaal. Badanaa waxaanu helnaa dhagaxyada volciga. Oo waxay noqon kartaa mid caadi ah dhagaxyada metamorphic qaarkood.
Inta badan da 'yarta waxay u dhacaan sida nodules dhagaxyada volcanic ama daasadaha qadiimiga ah. Dhiirashadii hore ee ay soo saartay qulqulatada ee asalka ah ee asalka ah. Markaa way buuxsantay, sidoo kale ama qayb ahaan, iyada oo arrin la aamusiyey. Lakabyada joogtada ah ee derbiyada. Agate wuxuu sidoo kale buuxin karaa xididdada ama dildilaaca, oo ah dhagaxa isweydaarsiga ah ama la beddelay ee hoos yimaada mareegta granitic intrusive. Dhallinyarada noocan oo kale ah, marka la gooyo, waxay muujinayaan isugeyn ah khadadka isku midka ah. Badanaa waxaa ka mid ah macaamil aad u adag. Waxay ku siineysaa muuqaal qurxan oo qaybta ah. Dhagaxyada noocan oo kale ah waxaa lagu xannibay agate, sidoo kale rooga agate iyo agate xayawaanka.
Marka la samaynayo agate caadi ah, waxaa suurtagal ah in biyaha ay ku jirto silica ee xalka. Waxaa laga yaabaa, laga bilaabo qallafsanaanta qaar ka mid ah silicates ee lafaha laftiisa. Waxay dillaacday dhagax weyn waxayna gelisay jaakad jilicsan oo ku taal gudaha weelasha. Isbeddelka astaamaha xalka ama sidoo kale xaaladaha mastaafurinta. Waxay keeni kartaa isbeddel ku habboon lakabyada isdaba jooga ah. Sidaa daraadeed qoryaha loo yaqaan 'chalcedony' ayaa badiyaa ku beddelan lakabyo quartz.
geetooyinka agate waa qaab-dhismeedka juqraafiyeed ee sare oo ka dhaca meelo gaar ah iyo dhagaxyada Volkaanka. Iyagu waa asal ahaan asal ahaan waxayna si dabiici ah u sameeyeen roobab kiimiko ah. Jaangooyooyinku waa godad, si tartiib tartiib ah u faafa si ay u naaqusiyaan tirada badan ee macdanta. Waxaa ka mid noqon kara kiristaalo. Waxay ka sameysan tahay sidoo kale buuxinta vesicles ee folkaanaha si dhagax hoosaadyada dhagaxyada by macdanta lagu keydiyo. Ka imanaya dareeraha hydrothermal ama baabi'inta qanjirada hunguriga ama isku-dhigmayaasha syngenetic. Iyo qayb buuxin ah isla ama sidoo kale macdano kale. Waxaa laga soo saarey biyaha diagenetic, sidoo kale biyaha dhulka hoostiisa ah ama dareerayaasha biyuhu.
geet geet-ka way ka duwan yihiin ugxannada qaab ahaan ah. Qaabkiisu wuxuu u yimaadaa xilli hore, wareegsan. Waxay ku dhisaan gudaha dhagaxa ku wareegsan. Geodes sidoo kale way ka duwan yihiin qanjirada. Nuujku waa maaddo fara badan oo macdanta ka mid ah oo isku ururay xuddunta nodule. Labada dhismeba waxay lahaayeen macdanta ku jirta gudaha, keydinta biyaha dhulka hoostiisa ama sidoo kale howlaha biyo-biyoodka